कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि बझाङका युवकले गरे आत्मह त्या
हिमालय एयरलान्सले असार २५ गते चिनबाट नेपालीहरुको उद्दार गर्ने
काठमाडौंमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै, सबैलाई सचेत रहन अनुरोध
हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडानको भाडा सार्वजनिक गर्‍यो ? कुन देशबाट आउँदा कति लाग्ने (तालिकासहित) - News & Entertainment
हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडानको भाडा सार्वजनिक गर्‍यो ? कुन देशबाट आउँदा कति लाग्ने (तालिकासहित)
हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो चार्टर्ड उडानको मिति र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ। एयरलाइन्सले जुन २० भित्रमा विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन गरिने चार्टर्ड उडानको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
हिमालयले सार्वजनिक गरेको भाडादर अनुसार कोलम्बो र मालेबाट काठमाडौंसम्मको भाडादर ३८० डलर तोकिएको छ । सो उडान जुन १६ (मंगलबार) हुनेछ । जुन १७ गते हिमालयको गन्तव्य ढाका, सिंगापुर र नोम पेङ छन् । ढाकाबाट काठामाडौं आउने यात्रुसँग हिमालयले १६५ डलर उठाउनेछ भने दुई स्थानबाट काठमाडौंसम्मको भाडादर समान ५२० डलर छ ।
जुन १८ मा हिमालयनले दमाम र क्वालालम्पुरबाट नेपालीलाई ल्याउँदै छ । दमामबाट आउन चाहनेले ४६५ र क्वालालम्पुरबाट आउन चाहनेले ३७२ डलर तिर्नुपर्नेछ । जुन १९ मा भने हिमालयनले पुरानै गन्तव्यबाट उडान भर्ने जनाएको छ । जसमा दमामको भाडादर ४६५ डलर कायम छ भने मालेबाट आउन चाहनेले अघिल्लो उडानभन्दा सय डलर बढी तिर्नुपर्नेछ ।
जुन २० मा हिमालयनले अबुधाबीबाट यात्रु ल्याउनेछ भने ढाकाबाट अर्को उडान गर्नेछ । आबुधाबीको भाडा *३८५ डलर तोकिएको छ । सोही दिन ढाकाबाट आउने उडानका लागि पुरानै दर तोकिएको छ ।
जून १६ कोलम्बो श्रीलका/माले, माल्दिभ्स ३८० ४५,९९९
जून १७ ढाका, बंगलादेश १६५ १९,९७३
सिंगापुर/ नोम पेन्ह, कम्बोडिया ५२० ६२,९४६
जून १८ क्वालालम्पुर, मलेसिया ३७२ ४५,०३१
दमाम, साउदी अरेविया ४६५ ५६,२८८
जून १९ दमाम, साउदी अरेविया ४६५ ५६,२८८
माले, माल्दिभ्स ४८० ५८,१०४
जून २० अवुधाबी, यु.ए.ई ३८५ ४६,६०४
ढाका, बंगलादेश १६५ १९,९७३
सरकारले नीजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको एयरलाइन्सलाई आफू अनुकुल भाडा तोक्न सहुलियत दिएको छ ।
विदेशमा वेखर्ची भएका बसेका नेपालीहरु भने सरकारले उद्दारको नाममा व्यापार गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
एकजना नेपाली कामदार विदेश जाँदा तिर्नुपर्ने श्रमस्वीकृति वापतको कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । त्यही रकम यो उद्दारमा खर्च गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ ।
मजदुर विदेश गएर पैसा कमाएपछि होइन, जानुअघि नै कोषमा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र श्रमस्वीकृति पाउँछन् । त्यो कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ। मजदुर अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यो कोष परिचालन हुन सक्दैन भने कोषको प्रयोजन के हो ? भन्दै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
हिमालय एयरलाइन्सले भाडादर सार्वजनिक गरे पनि ८५ प्रतिशत अकुपेन्सी यात्रु भएको खण्डमा मात्र उडान गर्ने शर्त राखेको छ । त्यस्तै यात्रुहरुले विमानमा चढ्नअगावै आफ्नै खर्चमा PCR वा RDT परिक्षणको नेगेटिभ नतिजा आएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साउन ७ गतेसम्म हवाई उडान र सीमा नाका बन्द गर्ने सकारको निर्णय
स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा
‘म अप्ठेरोमा परेँ, राष्ट्रियता र मेरो पक्षमा बोलिदिनुपर्‍यो’ – केपी शर्मा ओली